बि!बाद चर्किदा वडाध्यक्षको झन्डै गयो -
बि!बाद चर्किदा वडाध्यक्षको झन्डै गयो
काठमाडौं । हुम्लाको अदानचुली गाउँपालिका–१ का वडाध्यक्षमाथि हातपात हुँदा उहाँ सख्त घाइ,ते हुनुभएको छ । श्रीनगरको सडकका विषयमा छलफल हुने क्रममा वि,वाद चर्कि,एपछि वडाध्यक्ष रग थापामाथि हातपात हुँदा टाउको, मुख र शरीरमा चोट लाग्नाका साथै गम्भीर घा,इते भएको बताइएको छ ।
प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत अदानचुली गाउँपालिका–१को कार्यक्रम अनुगमनमा गएको समयमा एक्कासि वडाध्यक्ष थापामाथि ढुङ्गाले हा,नेर गम्भीर घा,इते बनाइएको छ । वडाध्यक्ष थापाले प्राविधिकको सर्बेविना श्रीनगरको सडक मनपरी ढङ्गले का,ट्न नहुने भन्दै सम्झाउन खोज्दा आफूमाथि एक्कासि ढुङ्गामुढा भएको बताउनुभयो । सो घट,नामा परी वडाध्यक्ष थापासहित तीनजना घा,इते भएका छन् ।
घा,इते हुने वडाध्यक्ष थापा, स्थानीय दीपक थापा र मक्क थापा गरी तीनजनाको अहिले स्थानीय स्वास्थ्यचौकीमा उपचार भइरहेको छ । यसभन्दा अगाडि साउन २२ गते नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पर्टी९नेकपा०बीच झडप भएको थियो ।रासस
Previous हिजो पनि म,र्न हिँडेको हो ! बरु म*र्न तयार छु-आ क्रोशमा प्रचण्ड
Next मेरो समर्थन देउवालाई ! देउवा जीलाई यस पछिको प्रधानमन्त्री बनाउन तयार छु -प्रचण्ड
घर बाहिर निस्किँदा मास्क लगाउनु नपर्ने
संकटा माईले हामि सबैको कल्याण गरुँन, हेर्नुहोस् असार ५ गते शनिबारको राशिफल